Green foundry bụ ohere dị mkpa iji melite mmepe nke ụlọ ọrụ foundry
site ha na 21-01-19
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, "nkedo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na ụlọ ọrụ ahụ, na maka ọdịnihu, anyị kwesịrị inwe ugwu na osimiri na-acha akwụkwọ ndụ. N'oge a, otu esi ewu ewu "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" na ụlọ anụ ụlọ, na kedu ihe kachasị mkpa iji wuo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ...
Ihe ndị chọrọ nlebara anya na-arụ ọrụ aka uwe n'ime
Mgbe a na-arụ ọrụ n'ime ime ahụ, ụkpụrụ na ihe achọrọ maka oghere uzo, ihe na-egweri ala, na ịgha ọka nke ụzọ ọsọ ahụ yiri nke uwe elu. Mgbe mgbanaka dị n'ime dị n'ime ala, a na-arụ ọrụ nhazi nke dị n'ime na mpụga ...
Metal agba mgbatị ụlọ ọrụ
N'afọ a, ụlọ ọrụ mgbatị osisi amalitela nke ọma. Site na mmepe siri ike nke ụgbọ ala, ụgbọ elu, ahụike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọ nyela usoro mmepe sara mbara maka ụlọ ọrụ nkedo ụlọ. The n'ibu mgbatị ụlọ ọrụ na-aga n'ihu nwayọọ na nke ...
Etu ị ga - esi eme nlekọta oge niile nke ịgbagharị agbagharị mgbe echichi
Dị ka data dị mkpa si dị, mmebi ahụ n'oge echichi nke ihe na-agba ọsọ na-agbakọ 20% nke mmebi nke mmebe ahụ. Kedu ka mmebi n'oge nrụnye nke agba nwere ike belata? Ihe ndị a bụ nkọwa zuru ezu banyere ihe achọrọ nke saịtị ahụ mgbe ...
Nkenke biarin aghọwo isi mmepe ụlọ ọrụ na mba “Iri na abụọ nke afọ ise Atụmatụ
Nrụrụ ahụ bụ akụrụngwa na-edozi ma na-ebelata esemokwu nke esemokwu n'oge usoro nnyefe igwe. Mgbe akụkụ ndị ọzọ na-agagharị na ibe ha na shaft ahụ, a na-eji ya iji belata esemokwu nke esemokwu n'oge nnyefe ike ma na-edebe etiti oghere osisi ...
Otu esi ahọrọ ụdị agba
Enwekwara mmeghe metụtara ya na otu esi ahọrọ akara na ụdị biarin. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe ezi uche dị na ya banyere amị na-adịtụghị mma, ma ọ bụ mgbe a na-eleghara ya anya ma ọ bụ na-eleghara ya anya, na-arụkarị ọrụ dị oke mkpa na ojiji nke biarin. Ka m nyere gị aka sayensị mara mma. 1. Gịnị bụ ndụ ...
Nrụgide oru Roller biarin, Full Complement Ball biarin, Ala Pin biarin, Taper ala agba Ndokwa, Self-kwado Ball agba, Inch Single Ahịrị,